RVi Institute’s Foundation Diploma in Management Studies • MCTA
နိုင်ငံတကာ အသိမှတ်ပြု စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အခြေခံသင်တန်း ကို မန္တလေးမြို့တွင် တက်ရောက်လိုပါသလား?
သင်တန်းပြီးဆုံးပါကလည်း စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ SIM Global Education တွင် ဒီပလိုမာ နှင့် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များမှ ပေးအပ်သော ဘွဲ့ဒီဂရီများကို ဆက်လက် တက်ရောက် ရယူနိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် Business & Management ကို စိတ်ဝင်စားသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတိုင်း တက်ရောက်သင့်သည့် သင်တန်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
– Study Skills for Effective Learning
– Introduction to Management
– Principles of Accounting & Business Finance
Additional Modules for Students
– ICDL (Presentation, Word Processing)
– Business & Management ကို စိတ်ဝင်စားသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ
– နိုင်ငံတကာ စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရပ်များကို လေ့လာလိုသူများ
– Diploma Programmes များကို တိုက်ရိုက်တက်ရောက်ဖို့ အခက်အခဲရှိသူများ
– နိုင်ငံခြားတွင် ကျောင်းသွားတက်ဖို့ စိတ်မချဖြစ်နေသူများ
– နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရပ်များကို ပြည်တွင်းတွင် လေ့လာလိုသူများ
ဘာကြောင့် SIM Diploma Foundation ကိုတက်ရောက်သင့်သလဲ?
– SIM Diploma in Management Foundation course ကို SIM Global Education မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော မန္တလေးမြို့၏ တစ်ခုတည်းသော Education Center ဖြစ်ခြင်း
– နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် သိန်း ၆၀ကျော် ခန့် သက်သာစေခြင်း
– Diploma နှင့် Bachelor သင်တန်းကို စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် တက်ရောက်ရုံဖြင့် UK, US, Australia, Switzerland နိုင်ငံတို့မှ ချီးမြှင့်သော ဘွဲ့ကိုရရှိနိုင်ခြင်း
– သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံရှိသော ဆရာ/ဆရာမ များမှ သင်ကြား ပြသပေးခြင်း
– လုပ်ငန်းခွင်နှင့် သင့်တော်သော နိုင်ငံတကာ အသိမှတ်ပြုပညာရေးဖြစ်ခြင်း
BEHS Average 60% & Above
IGCSE/GCE O Level – Minimum Grade C in3Subjects
“လူဦးရေအကန့်အသတ်ရှိတာမို့ စာရင်း စတင်ပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။”
🗓️ နေ့ရက် ။ ။ သြဂုတ်လ (၅) ရက်နေ့၊ ၂၀၁၉
🏛️ နေရာ ။ ။ မ-၆၉ /၂၊ ၅၃လမ်း x ၃၇ လမ်းထောင့်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် 📞 ၀၂ – ၄၀ ၇၃၃ ၂၅၊ ၀၂ – ၄၀ ၇၃၃ ၂၆၊ ၀၉ – ၂၀၁၁ ၄၀၆